Amadoda kaPaco abuya ngezigemegeme ezintsha | Bezzia
Ukubuya kwe-'Los Hombres de Paco 'kusondele!
USusana godoy | 04/05/2021 14:00 | Izindaba
'Amadoda kaPaco' Bebengomunye walolo chungechunge olusazilenga emakhanda ethu. Kwakungunyaka ka-2005 lapho saqala ngqa ukubona amaphoyisa amathathu anezimpilo ezingafani kodwa abe ngabangani iminyaka. Ukuzidela kwakhe, umndeni wakhe kanye nothando noma okubuhlungu kwenhliziyo kuzosheshe kusihlanganise nesikrini esincane.
Ngakho-ke eminyakeni emihlanu kamuva, njengakho konke okunye empilweni, yayizophela. Isiphetho esihlala sisishiya sifuna okungaphezulu, yize abalingiswa abaningi bebedlulile ochungechungeni. Kulungile manje ubuya nomoya omusha esizokwazi ukuwubona kungekudala I-Antena 3!
1 Impumelelo enkulu yeLos Hombres de Paco '
2 Zingaki izinkathi neziqephu iLos Hombres de Paco 'enazo?
3 Ingoma entsha yochungechunge lwe-Antena 3
4 Singayibona kuphi i- 'Los Hombres de Paco'?
Impumelelo enkulu yeLos Hombres de Paco '
Yize kwesinye isikhathi kwenzeka ngalo lonke uchungechunge, hhayi ngaso sonke isikhathi isizini ngayinye enempumelelo efanayo. Ngakho-ke, lapho abanye babalingiswa bayo beyishiya, mhlawumbe ukwehla kwezibukeli kungaba yinto enkulu. Kepha iqiniso ukuthi lapho 'abesilisa bakaPaco' befika kuthelevishini babone ukuthi konke lokho kuguquke kanjani. Babenakho konke esikufunayo futhi bekungamahlaya amahle, izikhathi zomzwelo nezothando, konke kuxhunyaniswe nohlobo lwabaseshi.. Ngenkathi izinkathi zidlula, abalingiswa abasha nabo bangeze kuziza ezikhona futhi bahlala bebaluleke kakhulu, ngezindaba ezintsha zothando nomona. Okuthile okwenza intshisekelo yomphakathi iphinde inakwe. Kukho konke lokhu nokunye okuningi, lolu chungechunge lugcine izithameli ezinhle futhi abalandeli balo bakhala ngesizini entsha.
Zingaki izinkathi neziqephu iLos Hombres de Paco 'enazo?
Uchungechunge, kuze kube manje, lunezikhathi ezingama-9 sezizonke futhi zonke zengeza iziqephu ezingaphezu nje kwezingu-117. Njengoba kungezona zonke izinkathi zonyaka ezazineziqephu ezifanayo ncamashi. Abanye basijabulise ngabangu-14 njengoba kwenzeka ngesizini yesibili, kanti okuvame kakhulu ukuthi babeno-12 noma u-13. Kwakuphakathi nobhadane nokuvalelwa, ngo-Ephreli 2020 lapho kwakukhulunywa khona ngokubuya okungenzeka. Ukuqoshwa kulindeleke ukuthi kuqale lelo hlobo uma kungenzeka. UPaco Tous uzwakale njengomunye wabalingiswa bokuqala ukuba kuyo. Kepha kungekudala ngemuva kwalokho, kwanikezwa amagama aziwa kakhulu ukwakha iqembu elake lasinqoba sonke. Eqinisweni, ehlobo lika-2020, uMichelle Jenner noHugo Silva nabo bazokuqinisekisa ukubonakala kwabo kwisizini entsha.
Ingoma entsha yochungechunge lwe-Antena 3
Sikhulume ukuthi abalingisi babonakala benakekelwa, ngakho-ke sizophinde sibabone abalingisi abakhulu kanye neqembu lamaphoyisa elingazi lutho kunabo bonke, kubandakanya nokhomishani. Kepha uma kukhona into eyodwa eguqukayo, yingoma yayo yomsindo. Manje sekuyithuba lika-Estopa, ophethe ukwethula 'El Madero'. Yingoma entsha ezoqala isizini entsha ka-'Los Hombres de Paco '. Yize ulikhumbula ngokuqinisekile iqembu likaPignoise, manje sekungu-Estopa ozothatha izintambo ukwengeza ingoma yochungechunge oluyimpumelelo.
Singayibona kuphi i- 'Los Hombres de Paco'?
Kubukeka sengathi izahluko ezintsha eziyi-16 zizohlukaniswa zibe izinkathi ezimbili. Kepha okokuqala, Kulindeleke ukuthi iqale ukukhonjiswa ku-Antena 3, ngohlelo lwePrime Time bese uqhubeka nokubukwa nge-Atresplayer Premium. Yilokhu okwenzekile ngochungechunge oluthile esikhathini esithile kamuva, esikwazile ukubona ngokusobala. Kulokho okulindeleke ukuthi kwenzeke okufanayo ne-'Los Hombres de Paco '. Njengoba kungewona wonke umuntu onale nkundla kodwa bafuna ukubona iqembu liphinde lahlangana, balwela okuhle futhi bakhumbule uthando lwakudala. Ngabe ufuna ikhishwe manje?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Ukubuya kwe-'Los Hombres de Paco 'kusondele!
Izindlela ezi-5 zokuhlela ukuqoqwa kwencwadi yakho